घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू डानिएले रुगानी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लेखले तपाईंलाई डेनिले रुगानी बचपन कहानी, जीवनी, पारिवारिक जीवन, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, प्रेमिका, व्यक्तिगत जीवन, र अन्य लोकप्रिय तथ्यहरूको पूर्ण कभरेज प्रदान गर्दछ जब उहाँ बच्चा हुनुभयो जबदेखि उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो।
डानिएल रुगानीको प्रारम्भिक जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र डेलीमेल।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक पटक गलत कारणहरूका लागि समाचारमा पर्नुभयो- पहिलो सेरी ए खेलाडी कोइभिड १ as को रूपमा चिनिने घातक कोरोनाभाइरस रोग संकुचन गर्न को लागी.
यद्यपि, केवल थोरैलाई डानिएल रुगानीको जीवनीको पूर्ण कथा थाहा छ, विशेष गरी उनको बाल्यकाल जुन खास चाखलाग्दो छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं, पूर्ण कथाको अघि हाम्रो सामग्रीको तालिकाको साथ।
डानिएल रुगानीको बाल्यकाल कहानी:
डानिएल रुगानीको प्रारम्भिक ज्ञात बाल्यकालिक फोटो मध्ये एक। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “दाजे दानी“। डानिएल रुगानीको जन्म जुलाई १ 29 1994 July को २ day दिनमा उनको आमा, लिआ रुगानी र बुबा, उबल्दो रुगानी मध्य इटालीको लुक्का शहरमा भएको थियो। फुटबलर दुई प्यारा बच्चाहरूको दोस्रो बच्चाको रूपमा संसारमा आए, आफ्ना प्यारा आमा बुबाको लागि।
अविवादास्पद एक इटालियन नागरिकको रूपमा परिचित, युवा डानिएल यसमा हुर्किए पोन्ट एक मोरियानो लुका शहरमा उसको आमा बुबा र ठूलो भाइको प्रेमले सिमोन भनेर चिनिन्छ। तल डानिएल रुगानीको आमा बुबाको एउटा फोटो छ- यो उसको सुपर बुबा हो जो उनी र उसको ठूलो भाइ दुवैलाई कस्सदै गरेको देखिएको छ।
डानिएल रुगानी आफ्ना बुबाआमा र ठूला भाई सिमोनको मायालु कम्पनीमा हुर्किए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
पोर्टे मोरियानोमा हुर्केकी, जवान रुगानी एक लापरवाह र रमाईलो बच्चा थिइन जसको फुटबल र टेनिस खेल्नेदेखि लिएर मायालु आइसक्रीम र पौडी खेल्ने जस्ता सुरुका चासोका असंख्य मानिसहरू थिए। बुबासँग खेलकुद मन पराउने, डानिएललाई यी खेलकुद गतिविधिहरूमा संलग्न हुन एकदम सजिलो थियो।
डानिएल रुगानी परिवार पृष्ठभूमि:
रुगानीको एक खेलकुद, विशेष गरी टेनिस खेल्नेसँग सम्बन्धित खेल एउटा खेल थियो जुन केटाले आफ्नो बाल्यावस्थाका साथीहरूसँग आंशिक आधारमा संलग्न गर्‍यो।
अर्कोतर्फ, फुटबलको लागि रुगानीको प्रेम मैत्री संलग्नता भन्दा परको थियो, यो वास्तवमा पारिवारिक खेल थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… दुनिएल रौगानीका दुबै आमाबुवा (तल चित्रमा) जुभन्टसका कडा प्रशंसक थिए, एक वफादारी जुन रुगानीले अधिकार गर्न सक्छिन्।
डेनिले रुगानीका अभिभावकलाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डानिएल रुगानी शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
सबै खेल मध्ये, यो फुटबल को लागी प्रेम थियो। तसर्थ, यो आश्चर्यजनक थिएन कि धेरै जवान रुगानीले आफ्नो क्यारियरको जग आफ्नो स्थानीय बाल्यकाल फुटबल स्कूल / क्लबमा राख्न सुरु गरे - एटलेटिको लुक्का। उमेर6मा (वर्ष २०००), खुशी युवाले ठूला चुनौतिहरूको सामना गर्न आफ्नो पहिलो-एकेडेमी क्लबलाई बिदाइ दिए।
एटलेटिको लुका जहाँ प्रतिस्पर्धी खेल फुटबल उन्मादका लागि शुरू भयो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
अगाडि बढ्दै, रुगानीले इम्पोली फुटबल क्लबको युवा प्रणालियोंमा व्यस्त क्यारियर निर्माण शुरू गर्‍यो। त्यहाँ, उनले आफ्नो युवा जीवनको एक दशक भन्दा बढी समय बिताए (२०००-२०११) आफ्नो कौशल सेटहरू विकास गर्दा जुन अब उसको खेल शैलीको हिस्सा हो।
जुभेन्टसमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
२०१२ मा रुगानी १ 18 बर्षको उमेरमा एम्पोलीले जुभेन्टसलाई loanण सम्झौतामा हस्तान्तरण गर्‍यो र दुबै पक्षले कसरी डिफेन्डिंग प्रोडिजीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ओल्ड लेडीको प्राइमवेरा (अण्डर २०) युवा टीम।
युवा केटा राम्रो एकेडेमी फुटबलर राम्रो गरे। त्यसभन्दा बढी, डानिएले रुगानीका परिवारका सदस्यहरूको खुशीको सीमा भने थिएन जुन उनले आफ्नो जुभेन्टसको युवा पक्षलाई आफ्नो पहिलो सत्र (२०१२ - २०१ 2012) मा कोप्पा इटालिया प्रिमभेरा जित्न सहयोग गरेका थिए।
यो पुरानो तस्बिर दिन बित्दै जान्छ तर कोप्पा इटालिया प्रिमभेरा उपाधि जितेको सम्झना डिफेन्डरको दिमागमा सँधै ताजा रहन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
टूर्नामेन्टमा रुगानीको प्रदर्शनले जुभले उच्च प्रदर्शन गर्ने डिफेन्डरको लागि इम्पोलीसँग सह-स्वामित्व सम्झौतामा प्रवेश गर्न सबै बाधाअड्काए।
जब सह-स्वामित्व सम्झौताको शर्तहरू पूरा भए, जुभेन्टसले २०१–-१–१ Ser अघि सेरी बी अभियान अगाडि रुगानीलाई एम्पोलीमा फिर्ता पठाए जसले उनलाई जुभेन्टसले पूर्ण रूपमा किन्न सक्ने सम्भावनाको योग्य साबित गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।
उनले फेरि एम्पोलीमा पठाइएको अवसर देखे र लगनशीलताका साथ यसलाई अधिकतम बनाउन खोजे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
भाग्यवस, रुगानीले अवसरलाई आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण मोडमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा राम्रो प्रदर्शन गरे किनभने इम्पोलीको डिफेन्स सिस्टममा उनको योगदानले क्लब सेरी बीमा दोस्रो स्थानमा पुगेको थियो र पालेर्मोको साथमा सेरी एमा स्वचालित पदोन्नति हासिल गर्यो जुन पहिलो हो।
ख्याति जीवनी कथा उठ्नुहोस्:
रुगानी, २०१ 2015 को ग्रीष्म .तुमा इम्पोलीसँग वरिष्ठ फुटबल अनुभव हासिल गरेर एक सिजन खर्च गरेपछि आधिकारिक रूपमा जुभन्टस २०१ 2015 मा फर्किए। टीमलाई सेरी ए खिताब जित्न मद्दत गरेर उसको पहिलो वरिष्ठ क्यारियर सीजन चिन्ह लगाइएको छ। रुगानी विशेष गरी पछि क्लबका लागि प्रमुख डिफेन्डर बन्न पनि गए Leonardo Bonucci २०१ Mila मा मिलानको लागि प्रस्थान गरियो।
डानिएल रुगानीको जीवनी लेख्न समय अगाडि बढ्ने, डिफेन्डरले विश्वव्यापी ध्यान लिएको छ भनिन्छ नहीं आफ्नो बचाव क्षमताको लागि तर कोरोइड १ as को रूपमा चिनिने कोरोनाभाइरस करार गर्न सेरी ए मा पहिलो खेलाडी हुन।
नतिजाको रूपमा, डिफेन्डर फ्यानहरू र प्रेसहरूको बिचार र प्रार्थनामा रहन्छ जुन धैर्यतासाथ ऊ भाइरसबाट स्वतन्त्र हुने र फिल्डमा फिर्ता हुने डरलाग्दो समाचारहरूको लागि कुर्दै छ।
जुभेन्टसको एक महामारी र पुष्टि ट्वीटले डिफेन्डर अदालतलाई विश्वव्यापी ध्यान दियो। छवि क्रेडिट: डेलीमेल।
डानिएल रुगानीको प्रेमिका, पत्नी र बच्चाहरू:
विशेष गरी गलत कारणका लागि विश्वव्यापी ध्यान खिचेको ख्यातिमा उनको वृद्धि संग, त्यहाँ वास्तव मा फुटबलर को बारे मा धेरै खोजी गरिएको छ। ती मध्ये डेनिल रुगानी प्रेमिका को लागी सोधपुछ गर्नु पर्छ।
हाम्रो आफ्नै अनुसन्धान गरिसकेपछि, हामीले यो जारी गरेका थियौं कि डिफेन्डरको एक प्रेमिका छ जो हालै वित्तिय हो र कुनै समय मा उसकी पत्नी हुनेछैन।
डानिएल रुगानी र उनकी प्रेमिका एकै साथ उत्तम देखिन्छन्। हैन?
रुगानी एक ईर्ष्यापूर्ण रोमान्टिक संलग्नता हो उनको प्रेमिका मंगेतर, मिशेल पर्सिको संग। लभबर्ड्स - जसको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छ - २०१ 2016 अघि टेनिस खेलमा भेटियो जुन मिशेलले खेल पत्रकारको रूपमा कभर गर्दै थियो।
खेलकुद पत्रकार भएकोमा मिशिला एक टिभी प्रस्तुतकर्ता हुन् जसले मनमोहक सुन्दरताका साथ नयाँ प्रेमिकाको लागि रुगानीको खोजीलाई अन्त्य गरिदिएको छ। उनको मुटुको जत्तिकै, उनले कोरोनाभाइरसको लागि सकारात्मक परिक्षण गर्‍यो तर असमानताहरू दुबैको छिट्टै निको हुने पक्षमा छन्।
लेख्ने समयमा पनि त्यहाँ ताजा खबर छ गिभमेस्पोर्ट्स त्यो डेनिले रुगानीको प्रेमिका र श्रीमती हुनु पर्ने (माइकल पर्सिको) हाल गर्भवती भईस भाइरसको करार पछि पनि। यो ठूलो अनिश्चितताको समयमा पनि, आशा गरौं उहाँ दुबै, मिशेल पर्सिको र बच्चा स्वस्थ र भाइरसबाट मुक्त हुनेछन्।
डानिएल रुगानीको पारिवारिक जीवन:
सहायक परिवारहरू र रुगानीको परिवारसम्म फुटबलमा उनीहरूको यात्राको सफलताको अद्भुत रक्षकहरू owणी छन्। यस सेक्सनमा हामी तपाईलाई डानिएल रुगानीको परिवारका सदस्यहरुको बारेमा उसको आमा बाबुको साथ लिएर आउँदछौं।
डानिएल रुगानीको बुबाको बारेमा:
रुगानीको बुवा, उबाल्दो जुभेन्टसको उत्कट प्रशंसकको साथसाथै साइकल चालक पनि थिए जो एक पटक इटाली एमेच्यर्सको दुई पटकको च्याम्पियन थिए। ऊ लेख्नको बखत - माछा मार्ने सामग्रीको एक प्रतिनिधि हो र छोराको नजिकको बुबा हो जसले उसलाई जुभेन्टस प्रशंसक भएकोमा गर्व गर्दछ।
के तपाईंले डेनिल रुगानीको बुबा बुबल्दोसँगको यस पुरानो बचपनको फोटो देख्नुभयो?
डानिएल रुगानीको आमाको बारेमा:
रुगानीकी आमा लिआ एक स्कूलका शिक्षक हुन् जसले उनको नैतिक शिक्षकको रूपमा डबल्स गर्छन्। उनले डिफेन्डरलाई उसको खेलहरूमा ध्यान दिन र खराब स्टीरियोटाइपहरूको खण्डन गर्न कहिल्यै छोड्दैन जुन फुटबल प्रतिभाको लागि परिचित छ। बढी के? उनी जुभेन्टसको फ्यान हुन् र उनीमा एक उत्कट।
डानिएल रुगानी आफ्नी आमा लियासँग राम्रो समय बिताउँदै। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डानिएल रुगानीका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
डानिएल रुगानीसँग केवल एक जेठो भाई छ जसलाई सिमोन भनेर चिनिन्छ। एक फुटबलर होईन, जेठो भाइ फुटबल मा चासो छ र धेरै अवसरहरु मा रुगानी शीर्षक जीत मनाईएको भेटियो।
डेनिले रुगानीको भाईलाई भेट्नुहोस् र डिफेन्डरको धेरै शीर्षक जित्यो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डानिएल रुगानीका आफन्तहरूका बारे:
डानिएल रुगानीको नजिकको परिवारबाट टाढा धेरै उसको पुर्खा र परिवारको जराको बारेमा थाहा छैन। विशेष गरी जब यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी, त्यहाँ डिफेन्डर काका, काकी र काकाजी का कुनै रेकर्ड छैन। विकास डिफेन्डरको भान्जी र भतिजाहरूका लागि बोर्ड भर जान्छ।
डानिएल रुगानीको व्यक्तिगत जीवन:
के तपाईंलाई थाहा छ रुगानीले मनमोहक गुणहरू मूर्त रूप लिन्छन् जुन व्यक्तिको विशेषताहरू हुन् जसको राशि चिन्ह लिओ हो? ऊ विनम्र, रमणीय, भद्र, मेहनती, महत्वाकांक्षी हो र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला छ।
गतिविधिहरू जुन रुगानीले उनको रूचि र रूचिमा संलग्न गर्दछ साइकल, माछा मार्ने, टेनिस खेल्ने, संगीत सुन्ने, गेमि,, यात्रा गर्ने, पौंडी खेल्ने र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने समावेश गर्दछ।
हामीलाई शंका छ कि उसले यस्तो ठूलो वजनदार माछा आफैं समात्यो कि भनेर। जे होस्, हामी टाढा साना व्यक्तिहरु लाई समात्ने उनको क्षमता को बारे मा कुनै शंका छैन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डानिएल रुगानीको जीवन शैली तथ्यहरू:
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई डिफेंडरले कसरी बनाउँदछ र उसको पैसा खर्च गर्छ भनेर बताउँछौं। सत्य के हो भने, डेनिएल रुगानीको जीवनी लेख्ने क्रममा उनको कुल सम्पत्ति $ million मिलियन डलर हो।
डिफेन्डरको सम्पत्तीको स्ट्रिमहरू ऊ माथि उडान फुटबल खेल्नको लागि प्राप्त हुने तलब र ज्यालाबाट सुरु हुन्छन् जबकि समर्थनले उसको आम्दानीमा ठूलो योगदान दिन्छ। यी पैसाहरूको साथ, रुगानीले फुटबल प्रतिभाको विलासी जीवनशैली बिताउन सक्छन जसलाई कार र घरजस्ता सम्पत्तिमा ठूलो खर्च गर्न कुनै समस्या हुँदैन।
उसको विशाल नेट मूल्य र बजार मूल्यको बावजुद, डिफेन्डरले एउटा सामान्य जीवनशैलीको छनौट गर्दछ किनकि ऊ अझै विदेशी कारहरूमा ड्राइभ गरिरहेको देखिन्छ। थप रूपमा, ऊ आफ्नी प्रेमिकाको साथमा बस्ने घरको मूल्य अझै अज्ञात छ।
डेनिएल रुगानी र उसको मंगेतर वास्तविक कार भन्दा बाइकमा सवारीको मजा लिदै भेट्न सजिलो हुन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हाम्रो डेनिले रुगानी बचपनको कथा र जीवनी समेट्न, यहाँ डिफेन्डरको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
वास्तवमा #1: डानिएल रुगानीको तलब ब्रेकडाउन:
March० मार्च २०१ 30 मा, रुगानीले जुभेन्टससँग उनको सम्झौता विस्तार गर्‍यो, जुन उनलाई २०२2019 सम्म क्लबमा राखिएको थियो। यो नयाँ करारले उसको सम्पत्ति बढायो, एक त्यस्तो कारबाहीले देख्यो कि उनले वरिपरि ठूलो तलब पाइरहेका थिए। € 3.1 मिलियन प्रति वर्ष। सानो संख्यामा डानिएल रुगानीको तलब ब्रेक गर्दै, हामीसँग निम्न छ।
पौंड स्टर्लिंग्स (£) मा उनको आय
के त्यो प्रति वर्ष कमाउँछ € 3,172,000 £ 2,863,459 $ 3,407,235
के उसले प्रति महिना कमाउँछ € 264,333 £ 238,621 $ 283,936
के उसले प्रति हप्ता कमाउँछ € 61,000 £ 59,655 $ 70,984
के उसले प्रति दिन कमाउँछ € 8,714 £ 8,522 $ 10,140
के उसले प्रति घण्टा कमाउँछ € 363 £ 355 $ 422.52
के उसले प्रति मिनेट कमाउँछ € 6.05 £ 5.91 $ 7.04
के उसले प्रति सेकेन्ड कमाउँछ € 0.10 £ 0.09 $ 0.11
यो कति छ डेनीले रग्नी कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
यदि तपाइँ माथि के देख्नुहुन्छ पढ्छ (०), यसको मतलव तपाई एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सेकेन्डमा उसको तलब वृद्धि देख्न.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… इटालीमा औसत कामदारले कम्तिमा पनि काम गर्नु पर्छ 5.9 वर्ष कमाउन € 264,333 जुन रकम डानिएल रुगानीले एक महिनामा कमाउँछ।
तथ्य # १: डानिएल रुगानी फिफा रेटिंग:
डिफेन्डरको राम्रो समग्र फिफा रेटिंग 82२ छ। रुगनीको सामर्थ्य र स्किसेटसेटको समग्र रेटिंगले देखा पर्दछ कि डिफेन्डर कति टाढासम्म पुगेको छ किनकि उसले potential 85 अ of्कको सम्भावित रेटिंग हासिल गर्न सकेको छैन।
ट्याटूहरू: रुगानी लेख्ने समयमा ट्याटुमुक्त छ र सायद आफ्नो बाँकी क्यारियरका लागि शरीर कला नहुन सक्छ। एक डिफेन्डरको रूपमा, उहाँ एक उत्कृष्ट शरीर निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुहुन्छ - जुन height फिट inches इन्चको उचाईसँग मिल्दछ - शरीर सुन्दरता भन्दा बढी।
डानिएले रुगानी पाल्तु जनावरलाई बचपनदेखि नै माया:
रुगानी सधैं घरपालुवा जनावरमा विशेष गरी कुकुरहरू भन्दा पहिले देखि नै आफ्नो प्रारम्भिक जीवन देखि ठूलो छ। ऊ तल घरपालुवा जनावर संग राम्रो समय बिताएको देख्न सकिन्छ जुन ऊ सँधै उसको घनिष्ठ मित्र हो।
के ऊ वास्तवमा उही कुकुर संग हुर्केको थियो? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
डानिएल रुगानी धर्म:
डानिएल रुगानीका आमा बुबाले उनलाई क्याथोलिक धर्मको इसाई धार्मिक विश्वासको पालन गर्न हुर्काएको हुन सक्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… नाम "डानिएल" हिब्रू ईसाई नाम हो जसको अर्थ हो "भगवान मेरो न्यायाधीश हुनुहुन्छ“। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि, विषमताहरू डानिएल रुगानी परिवारका सदस्यहरू इसाई भएकोमा ठूलो पक्षमा छन्।
डानिएले रुगानी ट्रिभिया तथ्य:
के तपाईंलाई थाहा छ वर्ष १ 1994 1994 beings केवल जीवहरू रुगानीको जन्म वर्षका लागि मात्र महत्वपूर्ण छैन? यो वर्ष हो जुन प्लेस्टेशनले आफ्नो पहिलो कन्सोल सुरू गर्‍यो। थप रूपमा, १ XNUMX XNUMX मा फोरेस्ट गम्प जस्ता उत्कृष्ट कृति क्लासिक चलचित्रहरू रिलिज गरिएको थियो। साथै, शाओशk्क रिडेम्पसन र डिस्नेको लायन कि anima्ग एनिमेसनहरूले त्यस वर्ष सिनेमा घरहरू मारे।
मुख्य घटनाहरू हेर्नुहोस् जुन डेनिले रुगानीको जन्म वर्ष (१ 1994 XNUMX)) रोचक बनायो। छवि क्रेडिट: NME।
डानिएले रुगानी विकी:
अन्तिम, डानिएल रुगानीको जीवनी तथ्यहरूमा, हामी तपाईंलाई उनको विकी नॉलेजबेस प्रदान गर्दछौं। तलको तालिकाले तपाईंलाई उसको बारेमा संक्षिप्त र सजिलो तरिकामा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
डानिएले रुगानी जीवनी तथ्यहरू
पुरा नाम: डानिएले रुगानी।
उपनाम: दाजे दानी।
मिति र उमेर: २ July जुलाई १ 29 1994 ((उमेर २ 25 मार्च २०२० सम्म)
जन्मस्थान: लुक्का, इटाली।
अभिभावक: उबाल्दो रुगानी (पिता) र लिया रगानी (आमा)।
Siblings: सिमोन रुगानी (जेठो भाई)
प्रेमिका: Michela Persico (मंगेतर र पत्नी हुन)।
उचाइ: १.1.90 ० मिटर (f फिट in इन्च)
वजन: 84 किलो।
व्यवसाय: फुटबलर (केन्द्र फिर्ता)।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद डानिएले रुगानी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।